नेपाल आज | नचाखिकन बिहे गर्दा फन्दामा परेकी नम्वर वान नयिका
कभर स्टोरी मेरो परिवार मेरो कथा मनोरञ्जन
नचाखिकन बिहे गर्दा फन्दामा परेकी नम्वर वान नयिका
मङ्गलबार, ११ जेठ २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
नेपालमा पनि सम्बन्ध बिच्छेद सामान्यजस्तै हुन थालेको छ । अग्नी भाकेर जीबनसाथी बनेकाहरु एकाध बर्षमै अलग हुने क्रम बढ्दो छ ।
सम्बन्ध बिच्छेदको क्रम बढ्दै जांदा परम्परागत पारिवारिक मान्यतापनि भत्किन थालेका छन् । जिंउनेमर्ने, संगै हिड्ने कसम खाएकाहरु आधा बाटो नहिड्दै छुट्टिनु पक्कै राम्रो होइन । तर, सम्बन्ध बिच्छेद कसैको रहर होइन । तसर्थ हामी श्रृखंलाबद्धरुपमा सम्बन्ध विच्छेदका कारण खोज्ने छौं । शुरुका केही भागमा हामीले सम्बन्ध बिच्छेद गरेका चर्चित पात्रको चर्चा गर्नेछौं । त्यसपछि ति पात्र र विज्ञसंगको जवाफ लिएर आउनेछौं । दास्रो अध्याय रेखा–छबिमा केन्द्रीत छ । सम्पादक
रेखा थापा र छबि ओझाको सम्बन्ध
रेखा थापा मोरङकी हुन् । उमेरले पुगनपुग ३४ बर्षकी भइन् । उनी फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेको डेड दशक भयो । आफुभन्दा बरिष्ठ र दमदार भनिएका कैयौंलाई पछि पार्दै उनी धमकेदार कलाकार बन्न सफल भइन् । सामाजिक संजाल फेसबुकका फलोअरलाई आधार मान्ने हो भने उनी नेपालकी सबैभन्दा बढी रुचाइएकी व्यक्ति हुन् । सन् १९९९ मा मिस टिनको टप टेनमा परेपछि रेखाको क्षितिज केही फराकिलो भयो । छबि ओझासंगको भेटले उनको फिल्मी यात्राले मूर्त रुप लियो । छबिनिर्मित फिल्म हिरोबाट उनले डेब्यु गरिन् । छबि ओझा उमेरले पचास लागिसके । उनी निर्माताका रुपमा अग्रस्थानमा छन् । नेपाली फिल्म दुनियामा उनले २६ बर्ष बिताएका छन् । नेपाली चलचित्र उद्योगमा आउनुअघि उनी भारतीय चलचित्र नेपालमा बेच्ने गर्दथे । सानैदेखि चलचित्रमा रुची थियो । घरमा कुटाइ सहन्थे, फिल्म हेर्न छोड्दैनथे । व्यापारव्यवसाय छोडेर कालान्तरमा फिल्म क्षेत्रमै लागे । चलचित्र क्षेत्रमा उनी रेखाको प्रवेश अघिनै नामी थिए । छबिकै छहारीले रेखालाई छोटै अबधीमा नामी र दामी हुन सहयोग गर्यो। पिरती नपत्याइंदो तरिकाले झ्याङ्गिदो रहेछ । उमेरमा १६ बर्षको अन्तर हुंदाहुंदै उनीहरुको लगनगांठो कसियो । झण्डैं १२ बर्ष यो जोडी चलचित्र क्षेत्रमा लोभलाग्दो रह्यो । श्रीमान् फिल्म बनाउने, श्रीमतीले कलाकारिता गर्ने । पैसा र प्रतिष्ठापनि उस्तै रह्यो । वैवाहिक जीबन सोचेजस्तो हुंदोरहेनछ । सधैंका लागि कसिएको गांठो १२ बर्ष नपुग्दै फुक्यो । रेखा र छबिको फिल्म यात्रा जमेपनि जीबनयात्रा टिकेन ।
रेखा करिअरका दृष्टिले छबिलाई गडफादर मान्छिन् । सम्मान गर्छिन् । तर, लोग्नेका रुपमा छबिको छबि राम्रो नरहेको प्रष्टाउछिन् । रेखा छबिकी तेस्री श्रीमती थिइन् । पहिलो श्रीमतीसंग बिछोड भयो । दोस्रीले आत्महत्या गरिन् । तेस्री रेखापनि धेरै टिकिनन् । रेखा प्रश्न गर्छिन, ‘श्रीमती रिझाउन नसक्ने छबिलाई कसैले केही नभन्ने, मलाई आलोचना गर्ने ?’
चाखेर बिहे नगर्दाको परिणाम
रेखा विवाह गर्दा किशोरवयमै थिइन् । छबि भने उमेरले पक्का थिए । छबिको नामजस्तै चलचित्र क्षेत्रमा भिन्दै छबि बनिसकेको थियो । सायद, प्रश्न गर्नै नपर्ने गरी छबिको व्यक्तित्वले रेखालाई आर्कर्षित गर्यो । विहे गुलाबी फुलको विस्तारा होइन, कांडैकांडाको यात्रा हो भन्ने उनले बुझिसकेकी थिइनन् । ‘तेस्रो श्रीमती हुन किन आएं ? दुईवटी पहिले नै किन टिकेनन्’ विवाहपछिमात्र रेखाले भेउ पाउन थालिन् । भन्छिन्, ‘चाखेर विहे गर्ने कुरा भएन, नचाखी बिहे गर्दा टर्रो पर्यो ।’
पहिलेका २ श्रीमतीसंगको बिछोड उतिसारो सार्वजनिक विषय थिएन । रेखासंगको सम्बन्धविच्छेद छबिका लागि चर्को परेको छ । ए वान नायिका र धेरैले रुचाएकी पात्र रेखासंगको सम्बन्ध विच्छेदका कारण छबि आफ्नो वैवाहिक व्यथाका बारे बेलाबेला प्रष्टिकरण दिन बाध्य छन् । वैवाहिक– ब्रेकको ह्याट्रिक गरेका छबि आफुलाई पूर्ण दोषी मान्न तयार छैनन् । उनी समयलाई दोष दिन्छन् । भन्छन्, ‘समयले यस्तो बनायो, दोष दुबैतर्फ छ ।’
उनी रेखासंगको सम्बन्ध बिच्छेदमा खुशी छैनन् । रेखाले छोडेपनि रेखालाई माया गर्न नछाडेको उनको भनाइ छ । दुःख व्यक्त गर्छन बिछोडप्रति । उनी रेखाले कसैसंग बिहे गरे मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भएपनि मुस्कुराइदिने बताउछन् ।
भावि विहेका बारेमा रेखा
रेखा बिहेबन्धनमा बांधिन चाहन्नन् । छबिसंगको १२ बर्षे बसाइले धोको पुगिसकेको छ । अब जीबनसाथीमात्र चाहन्छिन् । उनलाई सृष्टि गर्नुछ । तर, लोग्नेनै चाहिन्छ भन्ने छैन । उनी सन्तान सृष्टि गर्न चाहन्छिन् । तर, श्रीमतीकारुपमा होइन ।
छबिपनि चाहदैनन् चौथो बिहे
कि पढेर जानिन्छ कि परेर । छबिको जीबन वैवाहिक अनुभवको आफैंमा पाठशाला हो । तीनवटा विहे विग्रिएका दुःखी व्यक्ति हुन् उनी । उनलाई बिहे नभइन्जेल महिला निकै पृथक लाग्छ । विहे भएपछि सबै उस्तै । विहेपूर्व खुबै मिलेको मनपनि विहेपछि जुंध्न थाल्छ । त्यसैले उनलाई चौथो विहे गर्न मन छैन ।
छबिलाई चाहनेपनि थुप्रै छन् । नवजवान नायिकासंग उनको नाम जोडिन छोड्दैन । रेखाको त कुरै छोडौं । उनलाई छुन र हेर्नका लागि मात्रपनि हजारौं ओइरिने गर्दछन् । यि दुबै दुनियांको नजरमा अब्बल छन् । तर, वैवाहिकरुपमा अब्बल रहेनन् । आर्कषक व्यक्तित्व यि दुई विवाहपछि विर्कषित भए । खोट जस्को होस् , चोट दुबैलाई परेको छ । नतोडिएसम्म सम्बन्ध कांचजस्तै टलक्क टल्किने गर्दछ । तर, हरेक सम्बन्ध जोखिममा हुन्छ कांचजस्तै । जुनसुकै बेला टुक्राटुक्रा भइहाल्न सक्छ । कांचको दुनियांका दुई हस्ती रेखा–छबिको बिछोडले यसै भन्दैन र ?
(अर्को अध्यायमा हामी सम्बन्ध बिच्छेदको अर्को कथा लिएर आउनेछौं । सम्बन्धित पात्र र विज्ञको टिप्पणीसहितको अर्को श्रृखंला छंदैछ ।)
actress chhabi raj ojha director family gossip moive nepali film rekha thapa